‘बजारमा जे जस्तो हल्ला भए पनि डिबी सरले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ’ | Nepal's First Co-operative News Portal.
Home अन्तर्वार्ता [Interview] ‘बजारमा जे जस्तो हल्ला भए पनि डिबी सरले मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ’
परितोष पौड्याल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेफ्स्कून
नेफ्स्कूनको निर्वाचन सहितको साधारणसभा हुँदैछ । अध्यक्षको उम्मेद्वार पनि हुनुहुन्छ । तयारी कस्तो छ ?
सहकारी अभियानले हिजोका दिनमा पनि मलाई नेतृत्वमा देख्न चाहेको थियो । नेफ्स्कूनका वर्तमान अध्यक्ष डिबी बस्नेतसँग केही सहमती भयो । उहाँले भन्नु भएको थियो, ‘म तीन पटक उपाध्यक्ष भैसके । एक पटक महासचिव पनि भैसके । एक कार्यकाल अध्यक्षमा सहयोग गरिदिनुभयो भने अर्को कार्यकाल म तपाईंलाई सहयोग गर्छु ।’ त्यति बेला सहकारी अभियानका अगुवा व्यक्तिहरु सँग बसेर अर्को कार्यकालमा मलाई सहयोग गर्ने सैद्धान्तिक सहमती भयो । अहिले बजारमा जे जस्तो हल्ला चलेपनि अन्तिममा सोही सैद्धान्तिक सहमतीको आधारमा मलाई साथ र सहयोग गर्नुहुन्छ । नैतिक र भौतिक हिसाब मलाई सहयोग गर्नुहुन्छ ।
अघिल्लो साधारणसभाबाट तीन वर्षको लागि सञ्चालक समिति र लेखा समिति निर्वाचित भएको थियो । सहकारी ऐन–२०७४ अनुसार संघको विनियम संशोधन भई सञ्चाल समितिको अवधि चार वर्षको कायम भैसकेको छ । तर, विनियममा भएको व्यवस्थाभन्दा एक वर्ष अघि नै किन निर्वाचन तोकियो ? तपाईंलाई अध्यक्ष बन्न हतार भएर यस्तो निर्णय भयो भन्ने आरोप छ नी ?
हामी निर्वाचित भएको तीन वर्षको लागि हो । त्यतिबेला तीन वर्षको कार्यकाल थियो । आज बनाएको कानुनले हिजोलाई प्रभावित पार्न सकिन्न । हामी निर्वाचित भएर आईसकेपछि सहकारी ऐन आयो । ऐनले ४ वर्षको आवधिक निर्वाचनको कुरा गर्यो । हामी त्यसभन्दा पहिलानै निर्वाचित भएर आएका थियौं । हाम्रो सर्टिफिकेटमा तीन वर्ष लेखिएको छ । यस हिसाबले नैतिक प्रश्न उठ्ने भयो । सुशासनको प्रश्न पनि उठ्ने भयो । ३ वर्षको म्याण्डेट भएको हुँदा यही अनुसार नै हुन लागेको हो । यही हिसाबले सबैको सहमतीमा नै निर्वाचन सहितको साधारण सभा तय भएको हो ।
परितोषलाई अध्यक्ष बन्न हतार भएर राजनीतिक दलको दबाममा निर्वाचन सहितको साधारणसभा तय गर्न लगाईयो भन्ने आरोप छ नी ?
मलाई अध्यक्ष बन्न हतार भएको पक्कै होईन । डिबी सरले करिब २५ वर्ष नेफ्स्कूनमा बिताउनु भएको छ । म नेफ्स्कून प्रवेश गरेको १० वर्ष पुगिसक्यो । नयाँ पुस्ता नेतृत्व विकास गरेर बसेको छ । नयाँ पुस्तालाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । नेतृत्व विकास र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने ठूलो समस्या सृजना हुन्छ । उनीहरु निरत्साहित हुन्छन् । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया शंकुचन गर्नु हुँदैन ।
एक कार्यकाल नेतृत्व दिईसकेपछि विचारको प्रतिनिधित्व गर्ने, संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा नेफ्स्कून भित्रको कुशल अभ्यास नेतृत्व गर्ने कुरामा नयाँ पुस्ता विकास भैसकेको हुन्छ । नयाँ पुस्ताको स्थानको निम्ती पनि आवश्यक थियो । नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने विषय नियमित प्रक्रिया पनि हो । त्यो प्रक्रिया विषयमा हाम्रा कुराहरु व्यवस्थित हुनुपर्छ भन्ने हो ।
नेतृत्वका लागि तयार हुनुहुन्छ ?
नेतृत्वको विषयमा कुनै समस्या छैन । हिजो नै नेतृत्व लिन तयार थिएँ । वैचारिक पक्षको नेतृत्व, नैतिक पक्षको नेतृत्व, भौतिक, प्राविधिक लगायत सबै हिसाबले योग्यता राख्दछु । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएका सहकारी कुशल अभ्यासलाई नेपालमा बृहत रुपमा आन्तरिकिकरण गर्ने सन्दर्भमा म लागे । धेरै विषय स्थापित पनि बनाएँ । नीति, विधि र प्रविधि म आफैले निकालेको विषय हुन् । राज्यको नीति बनाउने सन्दर्भमा पनि मेरो भूमिका रह्यो । तीन खम्बे अर्थराजतीतिको विषयमा पहिलो पटक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति मै हुँ । इतिहासले पक्कै सम्झनेछ । संविधान, सहकारी अभियानमा मैले उठाएको एजेण्डा स्थापित भयो । ति एजेण्डालाई संस्थागत गर्ने र नेपालको समृद्धिको यात्रामा मेरो भूमिका हुनुपर्छ ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ राज्यले परिकल्पना गरेको छ । यसका लागि सहकारी अभियान माध्यम बन्नु पर्दछ । यो विषयमा हामी जागरुक छौं । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएका उच्चतम अभ्यासन कसरी नेपालमा आन्तरिकीकरण गर्ने ? सुसासको प्रवद्र्धन गरियो, लोकतान्त्रिकीकरणको कुरा उठायौं, अब वित्तीय समावेशिकरणको कुरा उठेको छ । दिगो वित्तीय विकासको कुरा उठेको छ । धन सृजना गर्ने विषय, नागरिकलाई समृद्ध बनाउनको लागि अत्मनिर्भरको विषय नयाँ आयामको रुपमा उठेको छ । यी विषयहरुलाई पूर्णता दिन वित्तीय शिक्षा, नैतिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा सहकारीताको माध्यमबाट दिनुपर्दछ । अहिलेको संरचना र गठबन्धनले नयाँ आयामलाई पक्रिन सक्दैन । त्यसले गर्दा सञ्जालिकरणको नयाँ आयाममा जानु पर्दछ ।
सहमतीको आधारमा नेतृत्व चयनको सम्भावना छ ?
पहिलो कुरा सहकारी भित्र सम्वाद र सहकार्य स्वभाविक ठानेका छौं । दलिय रुपमा पनि भागवण्डा नगर्ने तयारीमा जुटेका छौं । सहमती हुन सकेको अवस्थामा सहमतीबाटै निष्कर्षमा पुग्नेछौं । राजनीतिक सकृयता आवश्यक छैन । यदी सहमति हुन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन अन्तिम विकल्प छदैछ ।
सम्पूर्ण प्रतिनिधिलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
हामी एकताको सुत्रमा बाँधिनु पर्दछ । योग्यता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको आधारण नेतृत्व छनोट गर्नुपर्छ । विचार, मागर्दशन, सामथ्र्य, निष्ठा र अनुशासनको आधारमा पनि नेतृत्व छनोट गरिनु पर्दछ । छनोट गर्नको निम्ती सम्पूर्ण साथीहरुले विवेक पु¥याउनु हुनेनै छ । साथीहरुले नेतृत्वको विषयमा आंकलन पनि गर्नुभएको छ । व्यक्ती प्रधानभन्दा पनि नीति, विधि र प्रविधि प्रधान व्यक्तित्व आवश्य छ । वैचारिक नेतृत्व आवश्यक छ । प्राविधिक नेतृत्व आवश्यक छ । यो हेक्का राखेर मलाई साथ सहयोग पु¥याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ ।